AMP Template ee Bloggers -ka - Dhaqdhaqaaq Google AMP, Waa Fudud! - SOO
assignment_turned_in Hubinta kaydka AMP
power Qaab -dhismeedka AMP ee Blogger
warning Qalabka AMP ma shaqeeyo?
extension Ku dheji AMP YouTube Tag
extension Ku dheji AMP Brightcove Tag
extension Shaqeynta liiska tooska ah ee AMP
Tusaalaha Google AMP ee bilaashka ah ee loogu talagalay Blogger.com - Tilmaanta Tallaabada-tallaabo ah
Ku firfircoonow Google AMP hal sumad oo kaliya ! - Adeegso shaashadda bilaashka ah ee Blogger AMP ee laga heli karo halkan si aad si toos ah ugu siiso bogagga AMP ee u hoggaansamaya Google ee loogu talagalay dhejinta bartaada.
Ku hagaaji bartaada blogger aaladaha moobaylka iyo adeegsadayaashooda , taas oo sidoo kale ku hagaajineysa qoraaladaada habka moobilka ugu horeeya
Imtixaan hadda: geli meta tag oo waad dhammaysay!
Ku rakib / dhaqaajiso template AMP Blogger
Tilmaamaha tallaabo-tallaabo ee soo socda ayaa ku tusaya sida loo rakibo loona dhaqaajiyo template AMP-ga blog-kaaga. Ka dib markii lagu daro, wax kasta oo kale ayaa si otomaatig ah ugu socda asalka - fadlan ogow in mashiinka raadinta ay tahay inuu marka hore garto oo socodsiiyo sumadda AMPHTML bogagga shaqsiyeed ee balooggaaga ka hor inta noocyada AMP aysan si dhab ah uga soo bixin natiijooyinka raadinta!
Soo gal barta
Gal koontadaada Blogger oo aad tagto Dashboard-ka Blogger.
Geli nambarka widget ee AMP
Laga soo bilaabo dashboardka Blogger, u gudub xulashada soo socota:
Template -> Wax ka beddel HTML
Koodhka HTML, ku dar sumadda meta ee soo socota meel ku taal <madaxa> aagga:
Keydso oo waad dhamaysay!
Keydso Isbedelada. Qaab -dhismeedka AMP ayaa markaa la rakibay oo lagu hawlgeliyay baloogga!
Maxay tahay sababta loo yaqaan 'AMP template'?
Habkan rasmiga ah ee loo yaqaan 'AMP widget / template' ee loogu talagalay dadka wax qora ee wax qora, laga soo bilaabo amp-cloud.de, wuxuu hawlgeliyaa boggaga xawaareysan ee loo yaqaan 'Accelerated Mobile Pages (AMP)' ee ku yaal bartaada - sidaas darteed ku abuuri Google u hoggaansamida AMPs si fudud oo bilaash ah iyadoon aqoon dheeraad ah oo AMPH sheeko dheeraad ah lahayn, iyada oo aan waqti dheeraad ah lagu bixin. Noocyada qoraaladaada blogger, oo leh hal HTML meta tag ah!
AMP Seite erstellen Ilaalinta xogta & isticmaalka cookie daabac
Oggolow dhammaan kukiyada